DKMG oo sheegtay in ay qabsatay xaruntii ugu weyneeyd ee Shabaab | raascasayrmedia.com
← War Degdeg ah:Wafdi uu hogaaminaayo faarax dooxajoog oo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso.
Madaxweyne Shariif oo Barlamanka ku celiyay go’aankoodii kana Hadlay Dagaalada ka socda Gobolada Dalka →
DKMG oo sheegtay in ay qabsatay xaruntii ugu weyneeyd ee Shabaab
Dowladda KMG Soomaaliya iyo AMISOM ayaa si wada jir ah u sheegay in ay qabsadeen fariisinkii ugu weynaa ee Xarakada Al Shabaab ay ku lahaayeen Magaalada Muqdisho, isagoo tilmaamay in mar dhow ay soo afjarayaan dagaalada Muqdisho.
Wasiirka gaashaandhiga xukuumada KMG Soomaaliya C/Xakiin Xaaji Max’uud Fiqi oo u waramayay Warbaahinya ayaa sheegay in howlgal militari oo ay iska kaashanayeen AMISOM iyo dowladda KMG maanta uu ka dhacay Magaalada Muqdisho islamarkaana ay la wareegeen deegaanada Warshada Caanaha, Rugta Saraakiisha, Xaafada Shiirkole iyo wasaaradii gaashaandhiga.
Waxaa uu sheegay Fiqi in ciidamada Al Shabaab ay la kulmeen jab aysan filaneyn, isagoo intaasi ku daray in dagaalada ay sii wadi doonaan ilaa inta ay kala wareegayaan guud ahaan Magaalada Muqdisho oo uu tilmaamay in ay ku qabsan doonaan saacado yar oo soo socda.
Afhayeenka Ciidamada AMISOM Gaashaanle Bahuuko Bariijiya oo Shabelle la hadlay ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay galeen xarunta wasaarada Gaashaandhiga oo ay gacanta ku hayaan Al Shabaab halkaaso oo uu tilmaamay in ay ka soo abaabuli jireen qorshayaasha dagaal taageerana ay ka heli jireen sida uu hadalka u dhigay.
“waxa uu aha howlgal militari oo si wadajir ah ay u qaadeen AMISOM iyo dowladda KMG waxaa noo suura gashay in aan la wareegno halbowlihii AL Shabaab sida wasaaradii hore ee gaashaandhiga, Shiirkole iyo dhamaan fariisimihi ay ku lahaayeen Hodon” ayuu yiri Afhayeenka AMISOM.
Waxaa uu intaasi ku daray afhayeenka ciidamada AMISOM in ay soco doonaan weerarada ciidamadoodu ay ku qaadayaan Al Shabaab ilaa inta laga saarayo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Dhinkiisa afhayeenka xarakada Al Shabaab oo maanta warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in ciidamada Al Shabaab ay iska difaaceen weerarada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, isagoo intaasi ku daray in ay sii wadi doonaan difaacooda.